यस्तो अचम्मको घटना नेपालमै, जसले बनायो विश्व नै चकित, गाउँलेहरुले पनि गरे यस्तो! – PathivaraOnline
Home > समाचार > यस्तो अचम्मको घटना नेपालमै, जसले बनायो विश्व नै चकित, गाउँलेहरुले पनि गरे यस्तो!
काठमाडौं । नेपालमा एउटा उखान खुबै चर्चामा छ । पैसा तिर्नु पर्दा अमृत पनि नखाने तर निःशुल्क पाए अलकर्ता पनि खाने । यस्तै, जीविकोपार्जनका लागि भन्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले वितरण गरेको वोयर बोका गाउँलेले मासु खाएका छन् । गोरखाको सिरानचोक गाउँपालिका–३ हर्मीका प्रकाश अधिकारीलाई दिइएको वोयर बोका वुधवार वडाध्यक्षसहित स्थानीयले मिलेर खाएका हुन् । ***समाचारकाे भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहाेस***
सारा प्रबासीलाई रुवाए धर धरी
गीतकार ध्रुब प्रसाद अंम्गाई कोरोना माहामारीका कारण अलपत्र परेका स्वदेश तथा बिदेशमा रहने नेपाली दाजु भाई दिदी बहिनिहरुको पिडा लाई समेट्दै अत्यन्त मार्मिक, मन छुने अनी आँखा रसाउने गीत ‘तिमी लाई सन्देश ‘ बजारमा ल्याएका छ्न। शुक्रबार हेमन्त कान्छा रसाइली नामक यूटुब च्यानल बाट रिलिज गरिएको उक्त गीतले दर्शक तथा श्रोताहरुको मन मुटुमा बस्ने आशा लिएको गीतकार अंम्गाई बताउछन। गीतकार अंम्गाई आफै पनि बिगत लामो समय देखी प्रबासमा बस्दै आएका छन।
***समाचारकाे भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस***